कोरोना खोप लगाउने व्यक्तिलाई एक सय डलर ! - Netizen Nepal
कोरोना खोप लगाउने व्यक्तिलाई एक सय डलर !
in अन्तर्राष्ट्रिय, कोरोना विशेष, समाचार
काठमाडौँ, १५ साउन । अमेरिकामा सङ्क्रमण फैलिने क्रम चलिरहे पनि खोप लगाउने दर भने कम भएको छ ।
Tags: corona viruscovid-19vaccineकोरोना खोप